Blog - Hinds Feet Farm
Pandakatanga kupinda muRec Therapy ndakanga ndisingazive kuti chaive chii uye nekuwedzera kwandaiita ndipo pandakaziva kuti ndaive mundima chaiyo, ndinoda zvinhu izvo Rec Therapy inofanira kupa. Ndinoda kuziva kuti ndinogona kushanda nehuwandu hwevanhu, uye kuita zvirongwa nemapoka kuti zvienderane nehuwandu hwandiri ... Read More
Semunhu agara ari mumiriri wevanhu vakaremara, ndakakatyamadzwa kunzwa nezvenyaya yerecreational therapy pandakanyoresa kuWestern Carolina University. Mukati memesita yangu yekutanga paWCU, pandakanga ndakagara mukirasi yeNheyo dzeRecreational Therapy, ndakaona kuti kurapa kwekutandara kwaive kwakawanda kupfuura zvandaimboita ... Read More
Ndinogona kuyeuka nguva yokutanga yandakashanyira Hinds' Feet Farm panguva yerabhoritari yekirasi uye pakarepo ndichinzwa runyararo nechokwadi chakaramba chiri kwandiri kubva zuva iroro. Iwe unogona kunzwa rudo uye mufaro miniti yaunotsika tsoka paimba uye wega wega mushandi, mugari, uye nhengo yechirongwa chezuva akapararira ... Read More
Pandakatanga mukurapa kwekutandara, ndaisatomboziva kuti vanhu vakakuvara muuropi zvinorwadza vaive boka rataigona kushandira. Ndakanga ndisingaziviwo kuti makiromita asingasviki gumi kubva kwandakakurira kwaiva neHinds' Feet Farm, nzvimbo yandaizosvika pakuziva uye kuda. Ndakanga ndisingazive kuti inzira ipi yekudzidzira kwangu ... Read More
Patinofunga nezve kurapwa uye kukuvara kwehuropi ndiyo yekutanga kufunga ndeye rehab inoitika zvakananga mushure mekukuvara. Kashoma kuti tifunge nezve musiyano wekurapa kungaita muhupenyu hwemudiwa wedu makore mushure mekukuvara kwekutanga. Tichifunga nezvemashure eAllied Health Coordinator, Brittany Turney, nhengo dzichava nemukana wakasarudzika wekutora chikamu muOccupational uye… Read More
Pataifanira kuvhara zvirongwa zvedu zvezuva-munhu pakutanga kwedenda reCovid 19 takanga tichitsvaga nzira dzekuti nhengo dzechirongwa chedu dzirambe dzakabatikana uye dzakabatana panguva yavo pamba (uye edza kurovawo kufinhwa!). Saka, takaedza zvinhu zviviri zvakasiyana: mapepa ezviitiko zvemapepa, iwe chubhu mavhidhiyo evashandi vanodzidzisa mhizha kana ... Read More
Nzvimbo Itsva Yakazadzwa Papurazi! Brittany Turney achangobva kutora chinzvimbo chitsva papurazi reAllied Health Coordinator. Brittany akatanga basa rake papurazi chaizvo, semudzidzi weTR (Therapeutic Recreation Specialist) muHuntersville Day Programme. Achangogamuchira rezinesi rake seTR, akatanga kushanda pano papurazi muZuva… Read More
Shoko rekuti “kutevedzera” rinogona kuteverwa kuzwi rechiito rechiLatin rokuti “kukwana” rinoreva kuti “kuva nezvikamu zvose kana zvinhu, pasina chaunoshayiwa”. Vashandi nevazvipiri pano paHinds Feet Farm vanoramba vachiedza "kusashaya chinhu" mukupa kutarisirwa kwakachengeteka uye kusingadhuri kunhengo dzedu kuti dziite zvakanakisa. Isu tinoita izvi tichiramba tichitevedzera mitemo yakasimba uye… Read More
Huntersville Day Chirongwa
Sangana nemabhuru edu ane hushamwari epapurazi, Snickers uye Oriella! Snickers akaberekerwa pano papurazi anenge makore mashanu apfuura. Iwe unogona kunge watofungidzira kuti akawana zita rake kubva kune yake caramel-ruvara fur, kunge mukati meSnickers candy bar! Akazara nehunhu uye anoda kunyura pa clover. Oriella mutsva papurazi uye… Read More
Iwe kana mumwe munhu waunoziva munhu anotevera kujoina timu yeHinds 'Feet Farm?
Hinds' Feet Farm inogara ichitsvaga vanhu vanogovana chishuwo kune vanhu vatinoshandira kuti vabatane nechikwata chedu - kungave semushandi mutsva, mudzidzi ane chimwe chezvirongwa zvedu, kana anozvipira. Yedu Yedu Yekugara timu inopa 24-awa kutarisira uye rubatsiro kune nhengo dzedu dzinogara paHuntersville kambasi mune imwe yedu… Read More